"စက္ကူမြို့ကြီးများ" ၏အကောင်းဆုံး 44 စာပိုဒ်တိုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
"စက္ကူမြို့ကြီးများ" ကိုသင်သိသလား။ မင်းကသူ့ကို (၂၀၀၈ မှာထုတ်ဝေတဲ့) ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ပြီးနောက်မှာတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးမယ့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ပုဒ်လိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ။ ဇာတ်လမ်းကဇာတ်ကောင်ဇာတ်ကောင်ဟာသူ့အိမ်နီးချင်းကိုဘယ်လိုရှာသလဲ၊ သူမပျောက်ခင်ညတွင်အိမ်နီးချင်းကသူမအားသူမ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူမ၏နာကျင်ခံစားခဲ့ရသူအားလုံးကိုလက်စားချေရန်အစီအစဉ်တရပ်ချမှတ်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါဝတ္ထုကို John Green မှရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လူငယ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်းပရိသတ်အားလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် အကယ်၍ သင်ဝတ္ထုကိုဖတ်လျှင်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လျှင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
သရုပ်ဆောင်ရုပ်ရှင်တွင်တွေ့နိုင်သည့်စကားစုအချို့ကိုမမေ့ပါနှင့်။ အကယ်၍ ဝါကျများကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါသင်ရုပ်ရှင်ဟာဘာလဲဆိုတာသိလို။ ပို၍ သိလိုလာသည်၊ သင်မြင်ချင်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်သင်ဖတ်လိုလျှင်၊ သင်သည်ဝတ္ထုကိုကြည့်။ ရလိမ့်မည်။
နယူးယောက်မြို့သည်လူတစ် ဦး ကိုတစ်ဝက်ခံနိုင်ရည်ရှိရှိနေထိုင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည်။ -Jase to ကုန်ပစ္စည်း
စက္ကူမိန်းကလေးတစ် ဦး စက္ကူမြို့။ –Margo
သင်ကိုယ်တိုင်ရှာရန် ဦး ဆုံးသင်ကိုယ်တိုင်ရှုံးရမည်။ - Margo
အခွင့်အလမ်းတစ်ခုယူပါ၊ - Quentin
ငါဒီညလုပ်ဖို့အရာကိုးခုရှိတယ်။ ထက်ဝက်ကျော်လောက်မှာကားတစ်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံရာပါလိုတယ်။ - Margo
ငါဒီမှာတဆယ်ရှစ်နှစ်နေခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲ့ဒီအရာတွေကိုဂရုစိုက်တဲ့သူနဲ့ငါ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှမတွေ့ဖူးဘူး။ –Quentin
သင်ထွက်ခွာသည်အထိထွက်ခွာရန်ခဲယဉ်းသည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆိုးရွားဆုံးသောအဆိုးဆုံးအရာဖြစ်လာသည်။ –Quentin
လူတစ် ဦး သည်လူတစ် ဦး ထက်ပိုသည်ဟုယုံကြည်ရန်အလွန်သစ္စာပျက်သောအရာ။ - Quentin
နက်နဲသောအရာတို့ကိုသူမချစ်မြတ်နိုးပြီးသူမဖြစ်လာခဲ့သည်။ - Quentin
ရှက်စရာပဲ၊ မထင်ဘူးလား သူ့အတွင်းရှိကြိုးအားလုံးကျိုးပဲ့သွားသည်။ - Margo
အိုကေ၊ မင်းဒါကိုတွေ့လား ဒါကမင်းရဲ့နှစ်သိမ့်မှုဇုန်ပါ။ Quentin ကြီးတယ်။ သင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသင်လိုချင်သောအရာအားလုံးသည်ဝေးကွာနေပါသည်။ - Margo
မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား? - ရေဒါ
တစ်ချိန်ချိန်တွင်သင်ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တော့မည်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ်တစ်နေ့သောအခါသင်သည်နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးသင်လွင့်မျောနေသည့်အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ –Detective Warren
မြို့ကိုစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းမှတ်ဥာဏ်များမရ။ ငါဒီမှာလုပ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံး၊ ချစ်ခြင်း၊ သနားခြင်း၊ သနားခြင်း၊ သနားခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်နာကြည်းခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ –Quentin
ထိုနံနက်သည်မည်မျှဘဝဖြစ်ခဲ့သနည်း။ ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေဤမျှအရေးမကြီးပါ။ ကျွန်မတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေခဲ့ကြတာပါ။ –Quentin
Margo အတွက်လား တစ်စုံတစ် ဦး ကသူသည်ဘရော့ဒ်ဝေးပြဇာတ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်လူတစ်ယောက်ပြောတာကသူဟာဘာဟားစ်ကမ်းရိုးတန်းကိုလှည့်လည်ရှာဖွေတာကိုသင်ကြားနေတယ်လို့ပြောတယ်။ - Quentin
အရာအားလုံးနီးကပ်ပြင်းထန်သောဖြစ်ပါတယ်။ - Margo
Margo သည်အံ့ဖွယ်အမှုမဟုတ်ပါ။ သူမသည်စွန့်စားသူမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူမသည်အဖိုးတန်သောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သူမသည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ - Quentin
ငါကျပန်းပေါင်းစပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်၏။ ပေါင်းစပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအလယ်၌စကားလုံးများကိုဒါမတရားသောဖြစ်ကြသည်။ - Margo
ငါဒီမှာတဆယ်ရှစ်နှစ်နေခဲ့ဖူးတယ်၊ အရေးကိစ္စတစ်ခုကိုဂရုစိုက်တဲ့သူနဲ့ငါ့ဘဝမှာတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ - Margo
ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကနေနှလုံးခုန်မြန်လာတယ်လို့ခံစားရတယ် - Quentin
သငျသညျသူမ၏နောက်ဆုံးညဥ့်နှင့်အတူရှိကြ၏ ဆိုလိုချင်တာက - Lacey
ကမ္ဘာကြီးသည်လူတို့မည်မျှပြည့်နှက်နေသည်၊ တစ်ဟုန်ထိုးပြေးလွှားနေသည်နှင့်သူတို့တစ် ဦး စီသည်မမြင်နိုင်လောက်အောင်တသမတ်တည်းမှားယွင်းစွာယူဆထားကြသည်ကိုမေ့ထားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ –Quentin
မင်းရဲ့လက်ဖ ၀ ါးမှာတိုက်ကြီးတွေကိုမင်းခံစားခဲ့ရပြီးရင်ပြန်သွားဖို့ခက်ခဲမယ်လို့ငါထင်တယ်။ –Quentin
အရက်မူးသူနှင့်စကားပြောခြင်းသည်အလွန်ပျော်ရွှင်သောသုံးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှင့်အလွန် ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုနှင့်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ –Quentin
လူတစ်ယောက်ကအဲဒါထက်ပိုပြီး၊ လူတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုတာမှားယွင်းတဲ့အရာပဲ။ –Quentin
အဲဒီမှာသူမကိုတွေ့နိုင်ရင်တောင်ဒီကြီးမားပြီးအချည်းနှီးသောအဆောက်အအုံများအားလုံးထဲမှာကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တည်းခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်ဟာကမ္ဘာပျက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပေးအပ်ထားသလို၊ ဒီကမ္ဘာကြီးကိုပေးအပ်ထားသလို၊ …။ –Quentin
သူမသည် breadcrumbs ကဲ့သို့အနည်းငယ်သဲလွန်စထားခဲ့တယ်။ - Quentin
ငါ့ရည်းစားငါ့ကိုလှည့်စားခဲ့သည် လက်စားချေရန်ကြံစည်မှုစတင်! - Margo
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူမည်မျှပြန်ရောင်းဝယ်နိုင်မည်၊ လူတိုင်းသည်စိတ်ကူးယဉ်။ တသမတ်တည်းမှားယွင်းစွာယူဆထားကြသည်ကိုမေ့ထားရန်လွယ်ကူသည်။ - Margo
မည်သူမဆိုမိမိကိုယ်ကိုပြသရန်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တစ်ယောက်အားကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်ကိုသင်ကြားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ - Quentin
ပြီးတော့ဒါကကတိတစ်ခုနဲ့တူတယ်။ အနည်းဆုံးယနေ့ညအဘို့။ ကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါ၌တည်၏။ ကောင်းမကောင်း၌တည်၏။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၌၎င်း၊ အရုဏ်မရောက်မှီငါတို့ကိုကွဲပြားစေတတ်၏။ - Margo
ငါတစ်ခါမှမဖူးဖူးတဲ့မြို့တွေနဲ့ငါတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့လူတွေကိုငါချစ်တယ်။ - Quentin
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီသူသည်အခြားအရာအားလုံးထက်အထက်လုပ်ဖို့လိုအပ်သောအရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ Margo မဖြစ်ခဲ့တုန်းက Margo ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူသိချင်ခဲ့တယ်။ –Quentin
လူတွေကလူတစ်ယောက်ကြည့်ရတာကောင်းတာကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး နဲ့အတူရှိနေချင်တာဟာအမြဲတမ်းရယ်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်အမြဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အရသာအစားအရသာအတွက်မနက်စာကိုရွေးချယ်တာပါ။ –Margo
ဒီနေရာဟာငါဒီကားရပ်နားရာနေရာဖြစ်တယ်။ အိမ်နဲ့သိပ်ဝေးဝေးဘယ်တော့မှမရောက်ဖူးဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါချစ်တယ်၊ သူမနောက်ကိုလိုက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သမျှအခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းသည်သူရဲကောင်း၏ခေါ်သံဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ –Quentin
ငါမင်းကိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်သလား မင်းကိုငါမလိုချင်ဘူး၊ ငါသည်သင်တို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်၊ –Margo
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » "စက္ကူမြို့ကြီးများ" ၏အကောင်းဆုံး 44 စာပိုဒ်တိုများ